Thunderbird 15 Beta 1 miaraka amina endrika vaovao sy fifampiresahana | Avy amin'ny Linux
Thunderbird 15 Beta 1 miaraka amina endrika vaovao sy resaka mifangaro
Manana vaovao tsara ho an'ny mpampiasa an'i Thunderbird, ary izany no izy, na dia Mozilla ha Nanapa-kevitra ny hametraka ity tetikasa mahafinaritra ity, ny fanatsarana sasany dia mbola anampiana araka ny hitantsika eto ambany.
Ny lohahevitra Australis izay ho hitantsika tsy ho ela ao Firefox Izy io dia efa nampiana tao amin'ny Mail Manager manome endrika milamina sy kanto kokoa. Ho fanampin'izay, nanampy ny fanampiana Ubuntu One.
Zava-baovao iray hafa efa hitanay izy ireo taloha kelin'izay, ary io dia efa afaka mifaly amin'ny fandefasana hafatra amin'ny fomba mitambatra ao amin'ny Mail Manager. Afaka mampiasa ny kaontinay izahay Facebook, Gtalk, Twitter, XMPP y IRC.
Raha ny kaonty Twitter, misy zavatra izay havoak'izy ireo ihany taty aoriana, satria tsy mora toy ny tokony ho izy ny interface, ary hankasitrahana izany raha mameno ny anaran'ny mpanara-dia antsika sy ny namantsika.
Ny ambiny dia mandeha tsara, ary araka ny hitanao, ny fifandraisanay rehetra dia tafiditra ao anaty tontonana, manasongadina miaraka amina sary famantarana ilay protokol na kaonty ampiasanao.
Ahoana ny hevitrao momba izany rehetra izany? Mahagaga fa ny fanjifana amin'ny kaonty IM misokatra rehetra dia tsy mihoatra ny 110MB amin'ny voalohany .. Tsy maintsy nanandrana azy ireo nandritra ny fotoana kelikely aho hanaraha-maso ny RAM.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Thunderbird 15 Beta 1 miaraka amina endrika vaovao sy resaka mifangaro
Mahaliana ho ahy ny solosaina findrako izay ampiasako ny Thunderbird ary vaovao hafa fotsiny no tsy hosokafako, fa tsy eto amin'izay ahitanao ahy misokatra pidgin, turpial ary icedove.
misaotra amin'ny vaovao ary miandry ny fivoahan'ny kinova farany.
Fuck… vao iray na roa volana lasa izay dia tsy nampiasa Thunderbird intsony aho… HAHAHA
trolltux dia hoy izy:
niandry anao izahay hampiato ny fampiasanao azy mba hametrahana ireo fanatsarana vaovao: trollface:
Mamaly amin'ny trolltux
JP (@edconocerte) dia hoy izy:
Mampiasa gmail ho an'ny kaontiko rehetra aho. Niala tamin'ny thunderbird aho satria isaky ny kinova vaovao dia navesatra izany.
Valiny tamin'i JP (@edconocerte)
Vaovao vaovao tsy misy fisalasalana, nieritreritra ny hifindra amin'ny evolisiona aho fa zavatra hafa izany
Wow, tsara izany hoy oo raha i Icedove dia nahazo an'io fanavaozana io tamin'ny fitsapana (izay tsy heveriko) dia tsara 😛 Raha tsy izany dia arotsaho ilay pejy: /
Tsy dia inoako loatra izany. Ao amin'ny Debian, Iceweasel e Icedove Mandeha amin'ny andiany faha-10 izy ireo ary miaraka amin'ny hatsiaka fonosana, tsy isalasalana fa tena ampidirin'izy ireo izany.
Efa nolazaiko taminao Elav, fa amin'ny lohahevitr'i Thunderbird dia mbola tsy voalaza ny zava-drehetra, ny vaovao sy ny fivoarana mivantana an'i Mozilla dia mamela ny andiany 16, manomboka eo dia ho hitanao ny ataon'ny fiarahamonina, fa amin'ny inona izay novakianao tao amin'ny lisitra mailaka dia misy lohahevitra somary voalamina ary mpandraharaha maromaro izay efa manomboka manamboatra bibikely sy ny sisa. Hanohy hanohana an'i Thunderbir aho ary hanara-maso ireo lisitra hahitako izay vaovao sy ny fomba hanampianao.
Etsy ankilany, na dia tsy toa ilay endri-javatra mety indrindra aza izy tamin'izany fotoana izany dia tena ilaina amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha ary ankehitriny ny mailako avy amin'ny Oniversite dia amin'ny alàlan'ny gmail dia tena azo ampiharina.
Vaovao tsara, mbola mieritreritra aho fa Thunderbird no mpitantana kaonty mailaka mora indrindra sy feno indrindra any.
thunderbird dia tsara, tena mora ny manamboatra ary tena mandaitra
Ny tiako ho ataon'izy ireo dia rehefa manokatra ny programa izy ireo dia mangataka solon'anarana sy teny miafina amiko toa an'i Pidgin na programa fandefasan-kafatra hafa mba hataony ny reny rehefa tsy te hahita ny mailaka alefany amiko ny sasany satria misy ny sasany. tena manokana ary tsy maintsy mijery ny boaty fampidirana ahy aho.
Azonao atao ny manao zavatra roa, na mametraka tenimiafin'ny master amin'ny Thunderbird, na mamorona mombamomba hafa ho an'ny reninao ary manontany foana rehefa manomboka ny programa hanombohana ny mombamomba anao.
@Azzazel: misy sary ve!?
Tsy mbola nahita zavatra marefo sy tsy mahazo aina kokoa noho ny Thunderbird aho 😛
Ho an'ny mpanjifa mailaka maivana sy mandeha dia misy Claws (tena tsara) sy Sylpheed, efa somary mavesatra kokoa na dia tsy dia be loatra aza ny KMail (izay tsy dia tiako loatra nefa tafiditra ao amin'ny suite Contact ao amin'ny KDE SC) ary efa mavesatra kokoa nefa tsy misy isalasalana. ny mpanjifa mailaka tsara indrindra + PIM ho an'ny GNU / Linux, Evolution, Outlook, raha toa ka tianao - ary ny client mail ary ny mpitantana PIM tsara indrindra misy.
Ho an'ireo masochista dia misy koa Pine sy Mutt 🙂
Toy izany koa, ary arak'izay tiako ampiasana ny mpanjifa mail eo an-toerana dia efa zatra ny interface Gmail aho ary andao hanao ny marina: iza no tsy manana mpitety tranonkala misokatra amin'ny fotoana rehetra ankehitriny? Na dia tsy ampiasainay aza izany dia misokatra foana ilay browser ary izany no izy, ny fananana mpanjifa eo an-toerana ankehitriny dia manompo bebe kokoa noho ny zava-drehetra hahafahany mamerina ny kaonty mailaka antsika ary afaka mamaky mailaka rehefa tsy mifandray isika ...
¿Thunderbird ratsy tarehy noho Mailaka claws y Sylpheed? O_O
Mila manohitra anao aho! x'D
Inona ny lohahevitra GTK izay, toa ny SolusOS ve izany? Ary ahoana ny amin'ny sisin'ny varavarankely? Mila azy mafy aho, samy zavatra 😉
Hehehe ny lohahevitra Gtk dia Zukitwo-Dark ary mitovy amin'ny Xfwm 😀
faustodF dia hoy izy:
Tena naseho tsara ity kinova ity, tiako ny mba handaminana ny mailaka ataon'ny vondrona / olona (farafaharatsiny rehefa tsy mampiasa azy intsony aho), ka ho mora kokoa ny fanontaniana.
Saingy amin'ny ankapobeny dia hitako fa tsara izany. +10
Valiny amin'ny faustodF
ny rakitra tsy tonga mba hanatanteraka sa inona izany?
Ubuntu WebApps dia mitondra rindranasa tranonkala amin'ny birao
[Archlinux] GRUB Legacy dia tsy misy mpanohana